डिलोट सल्फ्यूरिक एसिडबाट सोनोइलेक्ट्रोलाइटिक हाइड्रोजन उत्पादन - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
पातलो सल्फ्यूरिक एसिडको इलेक्ट्रोलिसिसले हाइड्रोजन ग्यास र अक्सिजन ग्यास उत्पादन गर्दछ। अल्ट्रासोनिकेसनले इलेक्ट्रोड सतहमा फैलाव परत मोटाई कम गर्दछ र इलेक्ट्रोलायसिसको बखत मास ट्रान्सफर सुधार गर्दछ। अल्ट्रासोनिकेसनले इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा हाइड्रोजन ग्यास उत्पादन दर बढाउन सक्छ।
एक कार्बन एनोड र टाइटेनियम क्याथोडको साथ दुई प्रयोगात्मक सेटअपहरू तल वर्णन गरिएका छन्। इलेक्ट्रोलाइसिसमा अल्ट्रासोनिकेसनका सकारात्मक प्रभावहरू प्रदर्शन गर्न, टाइटेनियम क्याथोड एक सोनोइलेक्ट्रोड हो। यसले पातलो सल्फ्यूरिक एसिडबाट हाइड्रोजन र अक्सिजनको इलेक्ट्रोलाइटिक उत्पादनमा अल्ट्रासोनिक कम्पन र cavitation थप गर्दछ। बिजुलीको साथ अल्ट्रासोनिक्सको संयोजन Sonoelectrochemistry, Sonoelectrolosis र Sonoelectrosynthesis मा प्रयोग हुन्छ।
हिलस्चर अल्ट्रासोनिक होमोजिनाइजर UP100H (१०० वाट, k०kHz) एक सोनीलेक्ट्रोकेमिकल अपग्रेडको साथ सुसज्जित छ। यसले Sonotrode लाई एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रक्रियामा क्याथोड वा anode को रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। औद्योगिक Sonoelectrolytic सेटअप को लागी, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
UP100H अल्ट्रासोनिक प्रोसेसरमा Sonoelectric क्याथोड
Sonoelectrolysis सेटअप १ – एच-प्रकार Undivided सेल
सेटअपले पातलो सल्फ्यूरिक एसिड (H2SO4, 1.0M) प्रयोग गर्दछ। एक H-प्रकार अविभाजित सेल इलेक्ट्रोलाइटले भरिएको छ। यो सेल Hofmann भोल्टेम्बर को रूप मा परिचित छ। यसमा तीन सिधै सिधा सिलेण्डर जोडिएका छन्। भित्री सिलिन्डर इलेक्ट्रोलाइटले भरिने अनुमति दिन शीर्षमा खुला छ। बाह्य ट्यूबहरूको माथि भल्भ खोल्नाले कुनै पनि ग्यासलाई भर्ने क्रममा उम्कन अनुमति दिन्छ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा, इलेक्ट्रोडहरू रबरको घण्टीहरू द्वारा छाप लगाईन्छ र अप-डाउनलाई एसिडिफाइड पानीको घोलमा डुबाउँछ। सकारात्मक एनोड इलेक्ट्रोड कार्बन (mm मिमी) बाट बनेको हुन्छ। नकारात्मक क्याथोड एक टाइटेनियम अल्ट्रासोनिक सोनोइलेक्ट्रोड (१० मिमि, विशेष उच्च सतह क्षेत्र सोनोट्रोड, हिलस्चर UP100H, १०० वाट, k०kHz) हो। टाइटेनियम सोनोइलेक्ट्रोड र कार्बन इलेक्ट्रोड निष्क्रिय छ। इलेक्ट्रोलिसिस मात्र हुने छ जब बिजुली पातलो सल्फ्यूरिक एसिड समाधानको माध्यमबाट पारित हुन्छ। त्यसकारण कार्बन एनोड र टाइटेनियम क्याथोड स्थिर भोल्टेज पावर सप्लाई (प्रत्यक्ष प्रवाह) मा जडित छन्।
पातलो सल्फ्यूरिक एसिडको इलेक्ट्रोलाइसिसमा उत्पादन हुने हाइड्रोजन ग्यास र अक्सिजन ग्यास प्रत्येक इलेक्ट्रोडको माथि ग्रेजुएटेड बाह्य ट्यूबहरूमा संकलन गरिन्छ। ग्यासको मात्राले बाहिरी ट्यूबहरूमा इलेक्ट्रोलाइट विस्थापन गर्दछ, र थप ग्यासको भोल्यूममा मापन गर्न सकिन्छ। ग्यासको मात्राको सैद्धांतिक अनुपात २: १ हो। इलेक्ट्रोलाइसिसको अवधिमा इलेक्ट्रोलाइटबाट हाइड्रोजन ग्यास र अक्सिजन ग्यासको रूपमा मात्र पानी हटाइन्छ। तसर्थ, पातलो सल्फ्यूरिक एसिडको एकाग्रता इलेक्ट्रोलायसिसको बखत केही अलि बढ्छ।
तलको भिडियोले पल्सेट अल्ट्रासोनिकेसन (१००% आयाम, चक्र मोड, ०.२ सेकेन्ड, ०.8 सेकेन्ड बन्द) को प्रयोग गरेर पातलो सल्फ्यूरिक एसिडको सोनोइलेक्ट्रोलाइसिस देखाउँदछ। दुबै परीक्षणहरू २.१V (डीसी, स्थिर भोल्टेज) मा चलाइएको थियो।
यो भिडियोले सोफम्यान भोल्टमर्समा हाइड्रोजनको सोनोइलेक्ट्रोलाइटिक उत्पादन देखाउँदछ
सोफोलेन्ट्रोलाइटिक हाइड्रोजन उत्पादन होफम्यान भोल्टमर्समा
Sonoelectrolysis सेटअप २ – साधारण ब्याच
एक गिलास भाँडो पातलो सल्फ्यूरिक एसिड (H2SO4, 1.0M) को इलेक्ट्रोलाइटले भरिएको छ। यस साधारण इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा, इलेक्ट्रोडहरू एसिडिफाइड पानीको घोलमा डुबाइन्छ। सकारात्मक एनोड इलेक्ट्रोड कार्बन (mm मिमी) बाट बनेको हुन्छ। नेगेटिभ क्याथोड एक टाइटेनियम अल्ट्रासोनिक सोनोइलेक्ट्रोड (१० मिमि, एमएस १०, हिल्सचर UP100H, १०० वाट, k०kHz) हो। इलेक्ट्रोलिसिस मात्र हुने छ जब बिजुली पातलो सल्फ्यूरिक एसिड समाधानको माध्यमबाट पारित हुन्छ। त्यसकारण, कार्बन एनोड र टाइटेनियम क्याथोड स्थिर भोल्टेज पावर सप्लाई (प्रत्यक्ष प्रवाह) मा जडित छन्। टाइटेनियम इलेक्ट्रोड र कार्बन इलेक्ट्रोड निष्क्रिय छ। पातलो सल्फ्यूरिक एसिडको इलेक्ट्रोलाइसिसमा उत्पादन हुने हाइड्रोजन ग्यास र अक्सिजन ग्यास यस सेटअपमा स not्कलन हुँदैन। तलको भिडियोले अपरेसनमा यस धेरै साधारण सेटअप देखाउँदछ।
यस भिडियोले हाइड्रोजन र अक्सिजन उत्पादन गर्न पानीको सोनोइलेक्ट्रोलाइसिस देखाउँदछ
पानीको हाइड्रोजेन र अक्सीजनको Sonoelectrolysis
कृपया तलको फारम प्रयोग गर्नुहोस्, यदि तपाईं सोनोइलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको प्रयोगको बारेमा थप जानकारी अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ भने। हामी तपाइँलाई तपाइँको आवश्यक्ताहरू पुरा गर्ने अल्ट्रासोनिक प्रणाली प्रस्ताव गर्न खुशी हुनेछौं।
इलेक्ट्रोलाइसिस हुँदा के हुन्छ?
हाइड्रोजन आयनहरू नकारात्मक क्याथोडमा आकर्षित हुन्छन्। त्यहाँ, हाइड्रोजन आयन वा पानी अणुहरू एक इलेक्ट्रोन लाभले हाइड्रोजन ग्यास अणुहरूमा कम हुन्छन्। परिणामस्वरूप हाइड्रोजन ग्यास अणुहरू हाइड्रोजन ग्यासको रूपमा डिस्चार्ज हुन्छन्। धेरै प्रतिक्रियाशील धातु लवण वा एसिड समाधानहरूको इलेक्ट्रोलाइसिसले नकारात्मक क्याथोड इलेक्ट्रोडमा हाइड्रोजन उत्पादन गर्दछ।
नकारात्मक सल्फेट आयनहरू वा हाइड्रोक्साइड आयनहरूको ट्रेसहरू सकारात्मक एनोडमा आकर्षित हुन्छन्। सल्फेट आयन आफै पनि स्थिर छ, त्यसैले केहि पनि हुँदैन। हाइड्रोक्साइड आयनहरू वा पानी अणुहरू डिस्चार्ज हुन्छन् र एनोडमा अक्सिडाइज हुन्छन् र अक्सिजन बनाउँदछन्। यो सकारात्मक anode प्रतिक्रिया एक इलेक्ट्रोन घाटा द्वारा एक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड प्रतिक्रिया हो।
हामी किन पातलो सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग गर्छौं?
पानीमा हाइड्रोजन आयन र हाइड्रोक्साइड आयनहरूको मिनेट एकाग्रता हुन्छ, मात्र। यसले विद्युतीय चालकता सीमित गर्दछ। पातलो सल्फ्यूरिक एसिडबाट हाइड्रोजन आयन र सल्फेट आयनहरूको उच्च सांद्रताले इलेक्ट्रोलाइटको विद्युतीय चालकता सुधार गर्छ। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं क्षारीय इलेक्ट्रोलाइट समाधान जस्तै पोटेशियम हाइड्रोक्साइड (KOH) वा सोडियम हाइड्रोक्साइड (NAOH), र पानी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। नुन वा गन्धक एसिडको धेरै समाधानहरूको इलेक्ट्रोलाइसिसले नकारात्मक क्याथोडमा हाइड्रोजन र सकारात्मक एनोडमा अक्सिजन उत्पादन गर्दछ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वा क्लोराइड नुनको इलेक्ट्रोलीसीसनले एनोडमा क्लोरीन उत्पादन गर्दछ।
इलेक्ट्रोलाइजर भनेको के हो?
इलेक्ट्रोलाइजर भनेको एक उपकरण हो जुन पानीलाई हाइड्रोजन र अक्सिजनमा इलेक्ट्रोलाइसिस भनिन्छ। इलेक्ट्रोलाइजरले हाइड्रोजन ग्यास र अक्सिजन ग्यास उत्पादन गर्न बिजुली प्रयोग गर्दछ। हाइड्रोजन ग्यास संकुचित वा तरलीकृत ग्यासको रूपमा भण्डार गर्न सकिन्छ। हाइड्रोजन एक ऊर्जा वाहक हो कार, रेल, बस, वा ट्रकमा हाइड्रोजन ईन्धन सेलमा प्रयोगको लागि।
आधारभूत इलेक्ट्रोलाइजरले क्याथोड (नकारात्मक चार्ज) र एक एनोड (सकारात्मक चार्ज) र बाहिरी भागहरू, जस्तै पम्पहरू, भेन्ट्स, भण्डारण ट्याks्क्स, एक विद्युत आपूर्ति, एक विभाजक, र अन्य घटकहरू समावेश गर्दछ। पानी इलेक्ट्रोलाइसिस एक इलेक्ट्रो रसायनिक प्रतिक्रिया हो जुन इलेक्ट्रोलाइजर भित्र हुन्छ। एनोड र क्याथोड प्रत्यक्ष प्रवाह द्वारा संचालित हुन्छन् र पानी (H20) लाई यसको कम्पोनेन्ट्स हाइड्रोजन (H2) र अक्सिजन (O2) मा विभाजित गर्दछ।